Entertainment – SoShwe
Pocari Sweat ချစ်သူတွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်။
တန်ဟက်ဂျ် ပုံဖော်ထားတဲ့ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်။
ကြင်ယာဖက်ရဲ့ ရက်ရောမှုကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ ဆွေမျိုး ၂၃ ယောက်ကို စားသောက်ဆိုင် ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း မြူးမြူးကြွကြွဖြစ်စေဖို့အတွက် နားထောင်သင့်တဲ့ သီချင်းများ။
ရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်အတွက် လူသိရှင်ကြားဖွင့်ပြောလာတဲ့ Sporting ဘောလုံးဒါရိုက်တာ။
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အနာခံမှအသာစံရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ မြူးကြွတဲ့သီချင်းကို နားထောင်ရင်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုတက်ကြွစေပြီး အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းတောင် မသိတော့တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ယုံလိုက်ပါနော်။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မြူးကြွတဲ့သီချင်းကို နားထောင်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အားကစားဝါသနာရှင်တွေအတွက် အမြူးကြွဆုံး သီချင်းလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ Lizzo ရဲ့ ‘Good As Hell’ ၂။ Kendrick Lamar နဲ့ SZAတို့ သီဆိုထားတဲ့ ‘All The Stars’ ၃။ Hailee Steinfeld ရဲ့ ‘Love Myself’ ၄။ …
3 days ago	Entertainment 0
Demi Lovato နဲ့ Selena Gomez တို့နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးဟာ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကြောင့် ပိုမိုဝေးကွာသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးရဲ့အဆိုအရ “Demi နဲ့ Selena တို့အကြား ဘာပြဿနာမှမရှိသလို ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေလည်းမရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက သူငယ်ချင်းလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။” ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ Demi က “ကျွန်မ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အရှက်ခွဲခံခဲ့ရပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုတောင် မရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက ကျွန်မအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါဘူး။” ဆိုပြီး ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Demi အနေဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် Selena ကို အရှက်ခွဲသည့် Post များတင်နေသည်ဟု …
High School Musical ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ယခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ။
Disney Channel ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ High School Musical ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်(သရုပ်ဆောင်)တွေဟာ အခုချိန်မှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ငယ်ရုပ်လေးပျောက်ပြီး တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ယခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Troy Bolton အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Zac Efron ဟာ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ The Greatest Showman နဲ့ Baywatch ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ၂။ Troy Bolton ရဲ့ချစ်သူ Gabriella Montez အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ …
အကောင်းဆုံးသော သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားများစုစည်းမှု။ (Trailer နဲ့တကွ)
အခုလက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားတွေကို မကြည့်ဘဲနဲ့လည်း ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ရတာနှစ်သက်တဲ့ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကို မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ The Invisible Man – ချစ်သူရည်းစားဟောင်းရဲ့ သဘာဝလွန်ပြောင်းလဲမှုကို အသုံးပြုပြီး နှောင့်ယှက်ခြင်းခံနေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရည်းစားဟောင်းရဲ့ နှောင့်ယှက်ခြင်းကနေ လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားမလဲ။ ၂။ Color Out of Space – ဥက္ကာပျံကနေကျလာတဲ့ ထူးဆန်းသတ္တဝါလေးဟာ မိသားစုတစ်စုကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ ဘယ်လိုမျိုး ထိခိုက်လာစေမလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ၃။ Underwater – ရေအောက်မှာရှိနေတဲ့ ထူးဆန်းသတ္တဝါတွေဟာ ရေငုပ်ယာဉ်ထဲက …
အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင် ဝန်ခံလိုက်တဲ့ Keanu Reeves
4 days ago	Entertainment 0
ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Keanu Reeves နဲ့ Winona Ryder တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအစစ်အမှန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်တွေအားလုံး အံ့အားသင့်သွားစေမယ့်အကြောင်းအရာတခုကို Reeves က ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်စီအိမ်ထောင်ရေးအစပြုခဲ့ချိန်ကို ပရိသတ်တွေ သိရှိထားတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Reeves ရဲ့ လက်ရှိဝန်ခံချက်အရ အဲ့ဒီမတိုင်ခင် ဟိုးအရင်တည်းက အချိန်အများကြီးစောပြီး Ryder နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Reeves နဲ့ Ryder တို့ နှစ်ယောက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၉၉၂) ခုနှစ် ကာလတွေတည်းက ဖရန်စစ်ကော်ပိုလာရိုက်ကူးတဲ့ Bram Stoker’s Dracula ဇာတ်ကားမှာ အတူတကွ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး …
ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသားကြီး The Rock
The Rock ၊ ကီဗင်ဟတ်တို့ရဲ့ အချိန်ဇယားတွေ တော်တော်လေး ပြည့်ကျပ်နေချိန်မှာတောင် Jumanji4ဇာတ်ကားက အစီအစဉ်အတိုင်းပဲ ကောင်းကောင်းရှေ့ဆက်နေပြီး ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်ထက် ပိုမိုစောလျင်စွာ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အချိန်ဇယားကို အတိအကျ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူ ဟီယမ်ဂါစီယာက လက်ရှိစီးရီးရဲ့ တတိယမြောက်အဆက်အပြင် စတုတ္ထမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Jumanji Franchise တို့က ထင်ထားတာထက် အချိန်ပိုစောပြီး ပရိသတ်တွေရှေ့မှောက်ကို ရောက်လာမယ်လို့ အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၁၉) မှာ Jumanji: The Next Level ဇာတ်ကားနောက်ပိုင်း နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကို မျှော်လင့်ထားပေမယ့် ကိုဗစ်အခြေအနေကြောင့် ရိုက်ကူးရေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး အချိန်ဇယားတွေအားလုံး ကမောက်ကမ …
Justin Bieber တယောက် မျက်နှာလေဖြတ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း။
အားလုံးသိကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ဂျက်စတင်ဘီဘာတယောက် မျက်နှာတခြမ်း လေဖြတ်ကာ ပါးရွဲ့သွားကြောင်း သူ့ပရိတ်သတ်တွေကို Instagram ကတဆင့်အသိပေးခဲ့ပြီး အားလုံးတအံ့တဩ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့ အခုလိုရောဂါမျိုးခံစားရတာက သူ့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက် အများကြီး ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဂျက်စတင်ဘီဘာ ခံစားနေရတဲ့ မျက်နှာတခြမ်းလေဖြတ်တဲ့ Ramsay Hunt Syndrome ဆိုတာ ဘယ်လိုရောဂါလဲ? ဘယ်လိုကုသနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Ramsay Hunt ဆိုတာ အာရုံကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီး Variella ဆိုတဲ့ Virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုတာ ရေကျောက်ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပြီး လူခန္ဓာကိုယ်ထဲတခါရောက်ရင် တသက်လုံး နေထိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့အချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်က မျက်နှာအာရုံကြောတွေကို တိုက်ခိုက်ပြီး ရောင်းရမ်းယားယံစေပါတယ်။ မျက်နှာတခြမ်း လေဖြတ်တာဟာ ယောကျာ်းရော မိန်းမမှာပါဖြစ်တတ်ပြီး …
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းလက်သစ်ဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက်မက်နေတဲ့ The Rock
6 days ago	Entertainment 0
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင်ဟာ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားကို ငြိတွယ်စေခဲ့ဖူးမှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်နီယဲယ်ခရိတ်ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့အမူအရာနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟန်တွေကြောင့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းက ပိုမိုတောက်ပခဲ့သလို ဒန်နီယဲယ်ခရိတ်ရဲ့ နာမည်လည်းပျောက်ပြီး “ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား” ဆိုတဲ့အထိ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်သူလျှိုဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဒီဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ခရိတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသော ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတုန်းက “No Time to Die” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် ခရိတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၆) ကစလို့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို အခိုင်အမာရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဒီဇာတ်ကောင်ကနေ အနားယူသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ The Rock …
Iron Man မင်းသမီး Gwyneth Paltrow အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလား ? ? ?
အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် အော်စကာဆုရှင် Gwyneth Paltrowက သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့အနုပညာအလုပ်ကို စွန့်လွတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကောလဟာလတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး Gwyneth မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဟာ သူမရဲ့အနုပညာပိုးကို မလွှမ်းမိုးနိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Today Magazine မှ သတင်းတင်ဆက်သူ Savannah Guthriethis က Gwyneth ကို အင်တာဗျူးလုပ်ရာမှာ Gwyneth က တစ်ရှိန်ထိုးအောင်မြင်နေတဲ့ သူမရဲ့ အနုပညာအလုပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို အသိပေးမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Paltrow က “ကျွန်မက အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ Goop ကုမ္ပဏီအတွက်ကျတော့ …
Justin Bieber နဲ့ ပတ်သက်၍ သူမရဲ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ Billie Eilish
အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ပေါ့အဆိုတော်မလေး Billie ဟာ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှုကို မုန်းတီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ Justin Bieber နဲ့ မတွေ့ချင်ရတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။ Los Angeles သူလေး Billie ကို ကမ္ဘာ့အလုပ်အရှုပ်ဆုံး ကောင်မလေးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသလို သူမဟာ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီချင်းတွေကို သီကုံးရေးသားပြီး ထူးခြားစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ocean Eyes ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ဂီတလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး Instagram မှာလည်း Follower ၉၉သန်းကျော်ရှိတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ ကျွန်မအနေနဲ့ အနုပညာရှင်အမြောက်အမြားရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ …